​सिटिजन्स बैंकको नुवाकोटमा थप दुईवटा शाखारहित बैंकिङ सेवा
काठमाडौँ । सिटिजन्स बैंकले नुवाकोट जिल्ला थानापति र बालकुमारी दुई गा।वि।स।मा शाखारहित बैंकिङ सेवा विस्तार गरेको छ । यु।के।एडको लगानीमा संचालित सक्षम–एक्सेस टु फाईनान्स कार्यक्रमको सहकार्यमा भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लामा शाखा..
नबिल बैंकमा रहेको एनआईडिसीको शेयर बिक्रीमा, मुल्य न्युनतम १३५३ रुपैयाँ
काठमाडौं । एनआईडिसी डेभलपमेन्ट बैंकले नबिल बैंकमा रहेको करिब एक लाख ६३ हजार कित्ता शेयर बिक्री गर्ने भएको छ । एनआईडिसीले सस्थापक समूहको सेयर किन्न चाहनेका लागि बोलपत्र आब्हान गरेको..
​प्राइम कर्मसियल बैंकलाई एशिया प्रशान्त क्षेत्रको उत्कृष्ट बैंकको सम्मान
काठमडौं । प्राइम कमर्सियल बैंकलाई बेलायतको अक्सफोर्ड अन्तरगतको यूरोप विजनेश एसेम्बली (इबीए)ले यस वर्षको एशिया प्रशान्त क्षेत्रको उत्कृष्ट बैंकको अवार्ड प्रदान गरेको छ । बुधबार लण्डनमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच प्राइम कमर्सियल..
​प्रभु र गुराँस लाइफबीच बैङ्काइन्स्योरेन्स सेवा सम्झौता
काठमाडौं । प्रभु बैंक र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच बीच बैङ्काइन्स्योरेन्स सेवा उपलब्ध गराउने सम्वन्धमा समझदारी भएको छ । समझदारी पत्रमा प्रभु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन र गुराँसका नायब..
५० ठाउँमा शाखारहीत बैंकिङ सेवा दिन जनता बैंक र एक्सेस टु फाइनान्सबीच सम्झौता
काठमाडौं । जनता बैंक नेपाल र युकेएड सक्षम एक्सेस टु फाइनान्स कार्यक्रमबीच दाङ, कैलाली, अछाम र दार्चुलाका विभिन्न स्थानबाट शाखारहित बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा जनता बैंकका..
​सिटिजन्स बैंकको हकप्रदले इक्रा रेटिंङ्ग ग्रेड-३ पायो, शेयर बैशाममा जारी हुने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इण्टरनेशनल लिमिटेडले निष्काशन गर्न लागेको ५५ प्रतिशत हकप्रद शेयरले इक्रा नेपालबाट ग्रेड ३ रेटिंङ पाएको छ । बैकले चुक्तापूँजी वृद्धिका लागि १०ः५।५ अर्थात ५५ प्रतिशत हकप्रद शेयर..
​काँक्रेबिहार विकास बैंकको ८० हजार कित्ता हकप्रद शेयर लिलामीमा
काठमाडौं । काँक्रेबिहार विकास बैंकले ८० हजार कित्ता हकप्रद शेयर लिलामीमा राख्ने भएको छ । बैंकले यहि चैत १४ गतेबाट साधारण तथा संस्थापकगरी ७९ हजार ७ सय ४३ कित्ता हकप्रद..
​सिटिजन्स बैंकले प्रिमियर फाईनान्स किन्ने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले प्रिमियर फाईनान्स किन्ने भएको छ । बुधबार एक्विजिसन सम्बन्धी सम्झौतामा बैंकका तर्फबाट मर्जर समितिका सदस्य विजयध्वज कार्की र फाइनान्सका तर्फबाट मर्जर समितिका अध्यक्ष पुष्करमान शाक्यले..
जनउत्थान लघुवित्तले १५ प्रतिशत बोनस शेयर दिने
Posted on Mar 21 2016
काठमाडौं । जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त विकास बैंकले चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने र सोमा लाग्ने करवापतको रकम नगद लाभांश स्वरुपमा १ लाख ५७ हजार ८ सय ९४..
​ग्लोबल आईएमई र ट्रान्सफास्ट मनि ट्रान्सफरबीच सभ्झौता
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंक र ट्रान्सफास्ट वल्ड वाईड मनि ट्रान्सफरबिच रेमिट्यान्स कारोबार सम्बन्धि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आइतबार भएको सम्झौतापत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकका तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत..
​रिलायबल डेभलपमेन्टको घरघडेरी कर्जामा नयाँ स्कीम, घर फर्निसिङ र मर्मतमा समेत कर्जा
काठमाडौं । रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकले नयाँ कर्जा योजना “प्रोपर्टी प्लस” संचालनमा ल्याएको छ । व्यवसायिक वा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि घर-घडेरी किन्न, घर निर्माण तथा तला थप्न, घर फर्निसिंग तथा मर्मत गर्नको..
​आइएलएफसिओ माइक्रोफाइनान्सको साधारणसभा सम्पन्न, यस बर्ष सातवटा शाखा खोल्ने
काठमाडौं । इन्टरनेशनल लिजिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनीको सहायक कम्पनी आइएलएफसिओ माइक्रोफाइनान्सले आफ्नो चौथो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । संस्थाको चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ छ । संस्थाले फागुन मसान्तसम्ममा चारहहजार..
​नेपाल बैंक लिमिटेड पनि अन्तर बैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेड पनि अन्तर बैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा जोडिएको छ । नेपाल बैंक लिमिटेड र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडबीच अन्तर बैंक विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी सम्झौता भएको छ..
​वित्तीय प्रणालीलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मुलुकको वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाइनुपर्ने बताएका छन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखको प्रथम राष्ट्रिय गोष्ठीको बुधबार उद्घाटन गर्दै उनले पछिल्लो समय..
​महालक्ष्मी, सिद्धार्थ फाइनान्स र मालिका बैंक गाभिने, सबा १ अर्ब पूँजिको राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक बन्ने
काठमाडौं । महालक्ष्मी फाइनान्स, सिद्धार्थ फाइनान्स र मालिका विकास बैंक एक आपसमा गाभिने भएका छन् । तीन वटै संस्थाबीच गाभिने औपचारिक सम्झौतासमेत भइसकेको छ । सम्झौतापत्रमा महालक्ष्मीका मर्जर समिति संयोजक संजय..
मर्चेन्ट बैंकिङको काम गर्न सिटिजन्स बैंकले सिबिआईएल क्यापिटल खोल्यो
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले मर्चेन्ट बैंकिङको काम गर्न सहायक कम्पनीको रुपमा सिबिआईएल क्यापिटल लिमिटेड स्थानपना गरेको छ । बैंकको मु्ख्य लगानीमा संचालनमा आउने उक्त कम्पनी संचालनका लागि सञ्चालक..
​सिटी एक्सप्रेस र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसबीच अन्तरबैंक विद्युतीय भुक्तानी सम्झौता
काठमाडौँ । विदेशमा रहेका नेपालीको रेमिट्यान्स बैकिङ माध्यमद्वारा मुलुकमा भित्र्याउँदै आएको रेमिट्यान्स कम्पनी सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर र नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडबीच अन्तर बैंक विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी सम्झौता भएको छ..
​नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकले १६ प्रतिशत बोनस शेयर दिने
काठमाडौँ । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेडले आफ्ना शेयरधनीहरुलाई चुक्ता पुँजीको १६ प्रतिशत बोनस शेयर र लाभांश कर प्रयोजनका लागि ०.८४ प्रतिशत नगद लाभांश प्रदान गर्ने भएको छ। बोनस शेयरपछि..
सिटिजन्स बैंकको 'भिसा क्रेडिट कार्ड’ र ‘क्रेडिट कार्ड' सेवा सुरु
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले ‘सिटिजन्स डोमेस्टिक भिसा क्रेडिट कार्ड’ र ‘सिटिजन्स इन्टरनेसनल क्रेडिट कार्ड’ आजबाट सञ्चालनमा ल्याएको छ । सिटिजन्स भिसा क्रेडिट कार्ड स्वदेश तथा विदेशमा प्रयोग गर्न सकिने..
​साना किसान विकास बैंक १६ औं बर्षमा प्रवेश, कति गर्यो प्रगति ?
काठमाडौं । साना किसान विकास बैंक १६ औं बर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवधिमा बैंकको अधिकृत तथा जारी पुँजी ६४ करोड र चुक्तापुँजी ४० करोड २४ लाख ४९ हजार..
कुमारी बैंककोे ११ प्रतिशत बोनस सेयर साधारण सभाबाट पारित
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडका १५ औं वाषिर्क साधारण सभाले सेयरधनीलाई चुक्तापुुंजीको ११ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै शुन्य दशमलव ५८ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय..
​कृषि विकास बैंकले १५ प्रतिशत बोनश र ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर दिने
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले शेयरधनीलाई १५ प्रतिशत बोनश शेयर तथा ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर दिने हिजो विहिबार बसेको बैंक संचालक समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ । गत बर्षको मुनाफाबाट..
​एकै दिन बीओकेले प्यूठानको बिजुवार र दाङको भालुबाङमा शाखा खोल्यो
काठमाडौं । बैङ्क अफ काठमाण्डू ले ग्रामीण क्षेत्रमा बैङ्किङ सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ प्यूठानको बिजुवार र दाङको भालुबाङमा शाखा स्थापना गरेको छ । बिहीवार सञ्चालक सन्तवर सिंह थापाले बिजुवार शाखा..
​सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन ऐन ल्याइँदै
पोखरा । उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सहकारी ऐन ल्याउने तयारी गरिए पनि सत्तारुढ दलका केही व्यक्तिले त्यसको विरोध गरिरहेको बताएका छन् । कास्की जिल्लाको २४औँ जिल्ला परिषद्बाट स्वीकृत..
​सनराईज बैंकको विराटनगर शाखा स्थानान्तरण
काठमाडौं । सनराईज बैंक लिमिटेडले विराटनगर शाखालाई सोहि ठाउँको नयाँ स्थान हनुमानदास मार्गमा स्थानान्तरण गरेकोे छ । उक्त शाखाको समुद्घाटन बैंकका संचालक श्रवण कुमार गोयल र नेपाल राष्ट्र बैंक विराटनगर..
लघुवित्तको पनि लाइसेन्स रोक्ने तयारी, पुँजी वृद्धि गृहकार्य अन्तिम चरणमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको लाइसेन्स रोक्ने भएको छ । वाणिज्य बैंक, राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको लाइसेन्स रोकिसकेको राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको लाइसेन्स पनि रोक्न..
​प्रभु इन्स्योरेन्सको १९ औ शाखा जोमसोममा
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडले मुस्ताङ्गको जोमसोममा आफ्नो शाखा कार्यालय स्थापना गरी बीमा सम्वन्धी सम्पूर्ण कारोवार सञ्चालन गरेको छ । उक्त शाखाबाट ग्रामिण क्षेत्रका जनतालाई कृषि, फलफूल तथा पशु बीमा..
​भूकम्प प्रभावित जिल्लामा २ सय शाखारहित बैंकिङ (बिएलबी) संचालनमा
काठमाडौं । भूकम्पबाट बढी प्रभावित १४ जिल्लामा २ सय २ वटा शाखारहित बैंकिङ (बिएलबी) सञ्चालनमा आएका छन् । गत वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट प्रभावितलाई सरकारले प्रदान गर्ने राहत बैंकमार्फत पुर्‍याउने..
ग्लोबल आइएमई बैंक र एस बैंक भारत बीच रेमिट्यान्स कारोवार गर्ने सम्झौता
Posted on Mar 06 2016
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले भारतको एस बैंकसँग रेमिट्यान्स कारोवार गर्ने भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञावली र एस बैंक लि भारतका ग्रुप प्रेसिडेन्ट अरुण..
​६ लाख ५९ हजार कित्ता एफपिओ जारी गर्दै प्रिमियर इन्स्योरेन्स
काठमाडौं । गतबर्षको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई ३० प्रतिशत बोनश शेयर वितरणको प्रस्ताव गरेको प्रिमियर इन्स्योरेन्सले पूँजीवृद्धिका लागि फरदर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गर्ने भएको छ । इन्स्योरेन्स सञ्चालक समितिले साढे ६ लाख..
Results 1896: You are at page 40 of 64